Sunday February 19, 2017 - 08:23:58 in Wararka by Super Admin
Idaacadda Cilimi barista ee The Radio Africa Research Department ayaa sameysay xog uruurin ay ku doonaysay in ay ku ogaato dareenka dadka kenyaanka ah ka qabaan ciidankooda jooga soomaaliya oo muddooyinki dambe si ba'an ugu la'anayay Weerar
Xog uruurintan ayaa laga sameeyay magaalooyinka waaweyn ee dalka Kenya iyadoona qof kasta si gaar ah u weydiisay dareenkiisa ku aaddan ciidanka soomaaliya ka jooga.
Idaacadan ayaa sheegtay in dadka Kenya ay kasoo horjeedan ciidanka Soomaaliya ka jooga boqalki iba 63% halka boqolkiiba 37% ay tageerayaan go’aanka axmaqnimada ah ee dowladda Kenya.
Intii lagu guda jiray xog uruurintan shacabka Kenya boqolkiiba 80% ayaa waxay codsadeen in dowladda Kenya ay shaaciso khasaaraha ciidanka Kenya kasoo gaaray weeraradii xarakada Al-shabaab ay ku qaadeen saldhigyo milatari oo melleteriga Kenya ku lahaayeen Deegaanada Ceel-Cadde iyo Kulbiyoow oo Gedo iyo Jubbooyinka katirsan.
Shacabka Kenya ayaa sheegay in aysan rumaysnayn tirada ay xukuumadoodu kasoo saartay ciidankii looga dilay weerarkii lagu hoobtay ee ka dhacay Xerada Kulbiyoow.
Warbaahinta iyo shacabka Kenya ayaa si siman ula socoda warfaafinta islaamiga ah oo ay ugu horreyso baraha internet-ka marka ay dagaalamaan dagaalyahanada Al Shabaab iyo ciidanka Kenya si ay halkasi uga ogaadan khasaaraha ciidankooda lagu gaarsiiyay dagaalkaasi.
Si kastaba ha ahaatee waxaa soo xoogaysanaya baaqyada ay soo jeedinayaa shacabka Kenya ee ku aaddan in ciidanka Melleteriga laga soo daad gureeyo gudaha dalka Soomaaliya oo ay kusoo duuleen bishii October ee sanadkii 2011.